Offọdụ nkọwa ndị meizu 17 gosipụtara na AnTuTu | Gam akporosis
Meizu na-esote ọkọlọtọ na-akwado ịmalite na ahịa n'oge na-adịghị anya dị ka otu n'ime smartphones kachasị mma nke afọ a.
Anyị na-ekwu maka ya Meizu 17, mkpanaka di elu nke anyi tinyegoro ohere na nlebara anya n'oge gara aga ma ugbu a, abanyela n'ime nchekwa data AnTuTu, otu n'ime ihe nlere anya a ma ama na nke a pụrụ ịdabere na ya, tinyere ọtụtụ atụmatụ ya na nkọwapụta isi teknụzụ tupu ihe ọ bụla wepụtara na Eprel 17 ọzọ.
Kedu ihe AnTuTu kwuru banyere Meizu 17?
Maka ndị na-ebido ebido, ekpughere ama ahụ n’elu nyiwe nnwale dị ka ọnụ n’okpuru akara koodu ahụ “m2081”. A na-ahọpụta ya dị ka Meizu 17 site na obodo geek, ebe ọ bụ na ọ bụ ngwaọrụ dị elu nke na, dabara na àgwà nke onye nọchiri Meizu 16, ka etinyere.
AnTuTu kwadoro nke ahụ ọkọlọtọ ga-enwe 8GB nke LPDDR4X RAM na 128GB nke ohere nchekwa dị n'ime. O doro anya na a ga - enwe ụdị RAM na ROM ndị ọzọ a ga - agbanye aka na 10-12GB na 256GB, n'otu n'otu. Na mgbakwunye, Snapdragon 865, nke kachasị ike chipset nke Qualcomm taa, a na-ahụkwa na ndepụta ahụ nyere nkwụsị.
Modeldị isi, nke ga-abụ 8 + 128 GB a, ga-abụ naanị nke a ga-enye na LPDDR4X RAM ahụ e kwuru n'elu, dịka ihe ọhụụ gara aga si kwuo. Na mgbakwunye na nke a, ROM ga-abụ UFS 3.0.
Meizu 17 gbara na AnTuTu
N'aka nke ọzọ, a na-ekwu na Meizu 17 ga-enwe ihuenyo AMOLED nke 6.5 nke anụ ọhịa nwere ọnụego ume ume 90 Hz na mkpebi zuru ezu FullHD + nke 2,340 x 1,080. Na Qualcomm's SD865, ọ na-eche na ọ na-abịa na nkwado maka netwọkụ 5G.
Igwefoto kachasị ekwentị a ga - abata bụ ihe mmetụta 1 MP Samsung GW64. Enwekwara oghere elekere asatọ nke MP, 8 MP igwefoto telephoto, yana ihe mmetụta miri emi 5 MP; niile iji mee modulu quad. Edobebeghị ntọala igwefoto selfie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu anaghị eche ka meizu 17 mepee ma gosipụta ọtụtụ nkọwa ya